नेपालीको समृद्धि नै पार्टीको सपनाः डा भट्टराई « प्रशासन
नेपालीको समृद्धि नै पार्टीको सपनाः डा भट्टराई
१४ चैत्र २०७३, सोमबार
धनगढी । नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले सबै नेपालीको समृद्धि नै आफ्नो पार्टीको सपना रहेको बताएका छन् ।
नयाँ शक्ति पार्टीले थालेको हिमाल, पहाड, तराई र मधेस राष्ट्रिय अभियानको अन्तिम दिन आइतबार धनगढीमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै डा. भट्टराईले देशलाई एकताबद्ध बनाउँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले विगतमा एकात्मक राज्य चाहने केही पक्षले सङ्घीयताविरोधी काम गरेका कारणले नै सङ्घीय संरचनाको सवालमा अहिले विरोधका स्वर उठेको दाबी गरे । एउटै जातिको प्रभुत्व कायम गर्नेगरी सङ्घीयताको संरचनामा जाँदा यस्तो सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउँदै उनले जातीय क्लष्टर मिल्ने गरी सङ्घीयताको ठीक ढङ्गले प्रवद्र्धन गर्नु जरुरी रहेको बताए ।
नेपालको संविधान उत्कृष्ट भएपनि त्यसमा केही कमीकमजोरी रहेको उल्लेख गर्दै डा भट्टराईले भने, “सबैको चित्त बुझ्ने गरी संविधान संशोधन गरेपछि मात्र निर्वाचनमा जानुपर्छ ।” ठूला पार्टी सत्ताको खेलमा लागेका कारण संविधान जारी भएको डेढ वर्षसम्म पनि संशोधन हुन नसकेको उनले बताए ।
उनले विदेशी हस्तक्षेपबाट बच्न आन्तरिक राष्ट्रिय एकता हुनुपर्ने आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै संविधानमा नसमेटिएका शक्तिलाई समेट्न नसके देशमा बिग्रह निम्तिने चेतावनी दिए ।
नयाँ शक्ति पार्टीका भीमबहादुर खडायतको सभापत्विमा भएको सभामा नेता महेन्द्र पासवान, नवराज सुवेदी, रामकुमार शर्मा, नेतृ हिसिला यमी, करिष्मा मानन्धर, सांसद गङ्गा चौधरी, डा. जनक शाहलगायतले पनि बोलेका थिए । रासस
19 October, 2021 11:24 am
माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन सम्बन्धी कार्यतालिका संशोधन
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलनको कार्यतालिका संशोधन गरेको
19 October, 2021 10:53 am
प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा मोहम्मद दिवसको शुभकामना
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुस्लिम धर्मावलम्बीको पर्व मोहम्मद दिवसले
19 October, 2021 8:05 am
एमालेको संशोधित विधान यस्तो छ [पूर्णपाठ सहित]
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले नयाँ विधान प्रकाशन गरेको छ ।
19 October, 2021 7:52 am
महाकालीमा बाढी : खतराको सतह नाघेपछि शारदा ब्यारेजमा आवागमन बन्द
धनगढी । महाकाली नदीमा खतराको सतह नाघेको छ । आइतबारदेखि